Oslo: Labo wiil oo walaalo soomaali ah oo xabsiyo lagu xukumay. - NorSom News
Oslo: Labo wiil oo walaalo soomaali ah oo xabsiyo lagu xukumay.
Maxkamada magaalada Oslo ayaa labo wiil oo walaalo soomaali ah maanta ku xukuntay ciqaab xabsiyeed kala duwan, kadib markii lagu helay danbi la xiriira isku day dil iyo ka qeybqaadashadiisa.
Labada walaalaha ah, midkooda weyn oo da´diisu ay hada jirto 20 sano, ayay maxkamadu ku xukuntay 6 sano oo xabsi ah, kadib markii lagu helay labo danbi oo kala duwan oo isku day dil ah, loona adeegsaday mindi. Labada fal danbiyeed ayaa sida ay maxkamadu sheegtay ka kala dhacay xaafadaha Grønland iyo Furuset ee magaalada Oslo.
Wiilka kale oo 18 sano jir ah, ayay maxkamadu ku xukuntay hal sano oo xabsi ah, kadib markii lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa falka walaalkiis weyn loo xukumay. Maxkamada ayaa ka qafiifisay xukunka, maadaama xiliga uu falkaas ka dhacayay uu ka yaraa 18 sano. 18-jirkan soomaaliga ah ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamada.
Warbaahinta Oslo ayaa qoreyso in labadan wiil ay ku dhasheen Oslo, balse asal ahaan ay soomaali yihiin.
Xigasho/kilde: Knivstikking på Grønland knyttes til drapsforsøk i 2017
Previous articleDaawo SNTV: Norway oo Soomaaliya u saxiixday fulinta mashruuc muhiim ah.
Next articleKumanaan qof oo UK u dhashay oo qaatay dhalashada Sweden.